Translations < Myanmar (Burmese) < Twenty Ten < GlotPress — WordPress.org
Translation of Twenty Ten: Myanmar (Burmese)
View all posts by %s <span class="meta-nav">&rarr;</span> %s ၏ စာမူအားလုံးကို ကြည့်ရန် <span class="meta-nav">&rarr;</span>	 Details
%s ၏ စာမူအားလုံးကို ကြည့်ရန် <span class="meta-nav">&rarr;</span>
2015-06-28 13:53:39 GMT
Sorry, but nothing matched your search criteria. Please try again with some different keywords. သင်ရှာေဖွေသာ စကားလံုးြဖင့် ကိုက်ညီေသာ အရာကို ရှာမေတွ့ပါ။ အြခား စကားလံုးကို သံုး၍ ရှာေဖွြကည့်ပါ။	 Details
သင်ရှာေဖွေသာ စကားလံုးြဖင့် ကိုက်ညီေသာ အရာကို ရှာမေတွ့ပါ။ အြခား စကားလံုးကို သံုး၍ ရှာေဖွြကည့်ပါ။
2015-06-28 13:53:58 GMT
2015-06-28 13:53:37 GMT
Search Results for: %s %s အတွက် ရှာေဖွ ေတွ့ရှိမှု ရလဒ်များ	 Details
2015-06-28 13:53:57 GMT
About %s %s အေြကာင်း	 Details
2015-06-28 13:53:54 GMT
Author Archives: %s ရေးသူ မှတ်တမ်းများ : %s	 Details
ရေးသူ မှတ်တမ်းများ : %s
2015-06-28 13:54:14 GMT